ကဲ ဖတ်ကြည့်ကြရအောင်နော် ဘယ်လိုလဲဆိုတာ အကြံဥာဏ်လေး လည်းပေးကြပါဦး………… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ကဲ ဖတ်ကြည့်ကြရအောင်နော် ဘယ်လိုလဲဆိုတာ အကြံဥာဏ်လေး လည်းပေးကြပါဦး…………
ကဲ ဖတ်ကြည့်ကြရအောင်နော် ဘယ်လိုလဲဆိုတာ အကြံဥာဏ်လေး လည်းပေးကြပါဦး…………
Posted by kgmalay.girl on Aug 26, 2012 in Copy/Paste | 25 comments
စာရေးမယ် ရေးမယ်နဲ့ မရေးဖြစ်ဘူး။ ရင်ထဲမှာတော့ရှိတယ်လေ။ တစ်ခါတစ်ခါတွေးမိတယ် ငါရေးလို့ကောင်းပါ့မလား မကောင်းဘူးလားနဲ့ ဝေခွဲမရတာ လည်းကြာပေါ့ အခုတော့ မနက်ကပဲ သတင်းလေး တစ်ခု BBC ကနေပါလာတော့ ရေးဖို့ရာအကြောင်းပါလာတယ်။ BBC ဆိုလို့ နိုင်ငံရေး အကြောင်းရေးမလို့မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာလဲဆိုတော့ အဲကနေ မနက်ကပဲ ရန်ကုန် ILBC က ဆရာ/ဆရာမ တွေမကျေနပ်သံတွေကြားခဲ့ရလို့လေ။ သူတို့ကိုအားပေးချင်တာလည်းပါပါတယ်။ သိပ်စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့လို့ ရန်ကုန်မှမဟုတ်ဘူး တစ်ပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ ILBC ကျောင်းတိုင်း အဲလိုပါပဲလို့ပါ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ မန္တလေးILBC လည်းထိုနည်းတူစွာ ခံစားရတာတွေများတယ်ဆိုတာ သိစေချင်ပါတယ်။ လစာတိုးတော့ Department Head တွေရဲ့ အဆွေအနွယ်တွေက သူတို့ထက်လုပ်သက်ရင့်တဲ့လူတွေထက်ကို လစာက ပိုတိုးနေလို့ပါပဲ။ ဘာကြောင့်လဲတော့ မသိ။ ရင်ထဲတော့ မချိဆန့်ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီလိုကိစ္စတွေဆိုတာ အရင်အစိုးရလက်ထက် အစိုးရ ၀န်ထမ်းတွေမှာသာကြားဖူးတာပါ။ အခုတော့ ပုဂ္ဂလိက ကျောင်း တစ်ကျောင်းမှာ ဒါမျိုးတွေလည်းရှိပါလားဆိုတော့ ………စဥ်းစားသာကြည့်ကြပါတော့။ အခုဆို ILBC ကျောင်းက စ၀င်ဝင်ချင်း training period3months ဆိုပြီးတော့ အလုပ်အသစ်ဝင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုအရင် Train ပါတယ် အဲဒါ အပြင်လူတွေအတွက်ပါ ။ ပြီးတော့အဲ ၃လ မပြည့်မချင်း ၀န်ထမ်းတွေလစာမရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့ ထူးဆန်းတယ် ထင်ပါရဲ့ အကြီးပိုင်းတွေရဲ့ အဆွေအမျိုးတွေကျတော့ ၀င်ဝင်ချင်းလစာ ရတဲ့အပြင် training တောင်မဆင်းရပါဘူး။ လစာတိုးတော့လည်း ရိုးရိုးဝင်တဲ့လူတွေ ၁နှစ်မပြည့်လို့တဲ့မတိုးပေးပါဘူး။ သူတို့ကျတော့ တိုးတဲ့အထဲပါတယ်နော် အံ့သြပါရဲ့။နောက်ပြီးတော့ တိုးတော့လည်း သူတို့ထက် ၃နှစ်လောက် လုပ်သက်ရင့်တဲ့လူထက်တိုးတာ ပိုများနေတယ်။ ပြောလိုက်တာတော့ အကြီးကြီးပဲ သိလား။ ဆ၇ာ ၊ဆရာမ တွေ skill ပေါ်ကြည့်ပြီး လစာ သတ်မှတ်တာတဲ့။ ထင်တာတော့ ဆွေမျိုးမကင်းလည်း ပါပါရဲ့ထင်ပါ့။ ပြီးတော့ uniform ကိစ္စ စဥ်းစားကြည့်ကြပါဦး လစာရတာမှ နည်းနည်းရယ် ၀တ်ရတဲ့အ၀တ်အစားတွေက တစ်သောင်းခွဲအောက်မလျော့ဘူး။ ပြီးတော့ ချည်ထည်တဲ့ ချည်ထည်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ရော သိကြတဲ့အတိုင်းပဲ ရေလျှော်မခံပါဘူး ၃၊၄ ခါလောက်လျှော်ပြီးရင်ကို အရောင်မွဲသွားတာလေ။အခုဆို တအားကို ယုယတတ်နေပါပြီ၊ အ၀တ်လျှော်တဲ့အချိန်ပြောပါတယ်။ မထိရက် မကိုင်ရက်လေ လုံချည်လေးကိုပြောပါတယ်၊ International School တစ်ခုလုပ်နေပြီး ၀န်ထမ်းတွေဆီက uniform ဖိုး တောင်းနေတာကတော့ လွန်လား မလွန်လား စဉ်းစားသာကြည့်ကြပါဦး။ ဟိုတစ်နေ့က ညပိုင်း နံပြားစားချင်တာနဲ့ အိမ်က သွားဝယ်ခိုင်းလို့သွားဝယ် မိပါတယ်။ ဆိုင်ကတော့ ငယ်ငယ်တုန်းကပေါ့ သူငယ်တန်းကတည်းက နေ ၄တန်းအထိ သင်ခဲ့တဲ့ ငယ်ဆရာမ က ပင်စင်ယူပြီး ဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်ပေါ့။ သွားတော့ ဆရာမ ယောကျာ်းနဲ့လည်း ရင်းနှီးတော့ ဆရာမ ယောကျာ်းကလည်း သူ့မိန်းမ တပည့်မလေးမှန်းသိတော့ မေးပါတော့တယ် အဲမှာပဲ စိတ်ထဲ ကြိတ်ရီမိရတဲ့အဖြစ် ကိုတွေးမိပါ့။ ဘယ်မှာလုပ်နေလဲတဲ့။ မေးပြီပေါ့ကွာ၊ ဟောတော် ငါတော့ မဖြေချင်တာဖြေရတော့မယ်လို့တော့ တွေးမိလိုက်တယ်။ မဖြေချင်တာ တော့ တစ်မျိုးအထင်မလွဲပါနဲ့ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကို မလေးစားတာ အထင်မကြီးတာ ကျေးဇူးကန်းတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါ နဲ့မဖြေမဖြစ်တော့လည်း ဖြေလိုက်ရတယ် ILBC မှာလုပ်တာလို့ ဆရာမ အမျိုးသားက “ဟာ မိုက်တာပေါ့တဲ့” သမီးတော့ လစာတွေအမျာကြီး ရတာပေါ့တဲ့ ဟုတ်လားတဲ့ မဟုတ်ပါဘူးလို့ဖြေလိုက်ပါတယ်။ သမီးတို့အဲလောက် လစာမကောင်းပါဘူးလုိ့ဖြေလိုက်တော့ အံ့သြနေလေရဲ့ သူ့အကြည့်ကိုသိတယ် သမီးက ညာပြီးမသိ စေချင်လို့မပြောတာလို့ထင်ကောင်းထင်မယ်ပေါ့ တကယ်တော့ သမီးအမှန်ပြောတာပါလို့စိတ်ထဲ ကနေ ကြိတ်ပြောမိပါတယ်။ ဒါကို ILBC ၀န်ထမ်းတိုင်း သိမှာပါ။ လူတိုင်းပြောလိုက်ရင် ILBC ဆိုတာနဲ့ အထင်ကိုစွတ်ကြီးတော့တာပါပဲ။ တကယ်တော့ ၀န်ထမ်းတွေ အဲလောက် လစာမကောင်းပါဘူး သူတို့ ကလေးတွေဆီကရတာနဲ့ယှဉ်ရင် အသေးအဖွဲပါ။ ကလေးတစ်ယောက် ဆီကနေ ရတဲ့ တစ်လစာတောင် ဆရာမတွေမရပါဘူး။ လူတွေအထင်တွေမှားနေတာကို ပြချင်ပေမဲ့ ကျောင်းမှာစည်းကမ်းတစ်ခု ရှိပါတယ် လစာကို မပြောရဘူးဆိုတဲ့စည်းကမ်းပါ။ တစ်ယောက်လစာ တစ်ယောက်မသိရဘူးတဲ့။ အဲဒါ ဘယ်လိုထင်လဲ။ သူတို့တိုးပေးချင်တဲ့သူတိုးပေးလို့ရအောင် တစ်ဖက် တစ်လမ်းကနေ အကွက်ဆင်တာပါ။အဲဒါမှ ဆွေမျိုးတွေဆီ လူမသိသူမသိ လစာပိုတိုးပေးတာ ပြသနာမတက်မှာလေ။ခက်တာက လည်း ဒီကိစ္စဆိုတာ သိဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘာလို့ပြောနိုင်တာလဲဆိုတာလည်းရှိပါသေးတယ်။ ကျွန်မ တောင်အသိ မိတ်ဆွေများလို့ သူတို့ ဒီလိုလစာပိုများတာ သိတာပါ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကျွန်မလို ရိုးရိုး ၀င်တဲ့ သူချင်း ခံစားချက်ချင်း မျှဝေချင်တော့ သူတို့လည်း ကျွန်မကို သူတို့ခံစားချက်ကို မျှဝေ ကြတာပါ။ ဒါကြောင့် အသိမိတ်ဆွေ တွေဆီကနေ ကျွန်မ သူတို့ အမျိုးတွေ လစာပိုတိုးတာကို သိခဲ့တာပါ။ ကျွန်မလည်း သိသိချင်း တော်တော်ကို ခံစားမိသွားတယ်။ ငါတို့လို လုပ်သက်ရင့်တွေတောင် သူတို့လောက် လစာမတိုးပါလားလို့။ဘုရား ဘုရား မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ အစစ် မရသေးပါလားလို့။ ငါတို့ ဒီလို ခံနေရတာတွေ ပြောပြဖို့ ဘယ်သူ့ကိုသွားတိုင်ရမလဲ။ အဲဒီတော့ ရင်ဖွင့်ရုံပင် ဘာမှမတတ်နိုင်ပါလားလို့။ ဒါကြောင့် ILBC ၀န်ထမ်းတွေကိုမြင်တိုင်း စွတ်အထင်မကြီးစေချင်ပါဘူး။ ကျွန်မပြောတဲ့အထဲမှာ သူတို့အရည်အချင်း ကိုမဟုတ်ဘူးနော်။ အရည်အချင်းကတော့ တကယ်ရှိကြတဲ့သူတွေပါ။ တကယ်ကိုတော်ကြပါတယ် ။ လစာ မများပါဘူးလို့ နောက်ပြီး ကိုယ်ဝတ်တဲ့uniform ကို ကိုယ်တိုင် ပေးဝယ် ၀တ်ကြရပါတယ်လို့ ကြားဖူးအောင်ပြောပြတာပါ ဘယ်ကုမ္ပဏီမှ ၀န်ထမ်းဆီက uniform ဖိုးမတောင်းကြပါဘူး။ဒါပေမယ့် ILBC ချွင်းချက်ထဲမှာပါပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတို့လည်း မကြားဖူးတာ ကြားရအောင်ပါ။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းလည်း မပြောရဲကြပါဘူး ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သိတဲ့အတိုင်းပဲလေ လူ့သဘာဝကိုက ကို့ကို မကောင်းပြောတဲ့လူရှိရင် အဲလူကို ဂွင်တွေ့ရင်တွေ့သလို နှိပ်ကွပ်တော့မယ်လေ။ ကျွန်မတို့မှာသူတို့ဖိတဲ့ အတိုင်းခံနေရဖို့ ၀ဋ်ကြွေးပါပြီလေ ပြီးတော့ ILBC Preschool က Head တွေအကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်းလေး လည်းမျှဝေချင်ပါတယ်။ ဟဲဟဲ ကျွန်မက preschool ဘက်ကမဟုတ်လို့ ၀န်ထမ်းအချင်းချင်း စာနာမိတာလေးပါ။သူတို့မှာ Head တွေရှိပါတယ် တော်တော်ဆိုးတယ်လို့လည်းကြားပါတယ်။ လူသားအချင်းချင်းစာနာမှု ကိုမရှိသလောက်လို့လည်းကြားပါတယ်။ မိဘတွေရှေ့ဟဲဟဲဟဲဟဲနဲ့ ဆရာမတွေဆိုရင် မျက်နှာက တစ်မျိုးဆိုပဲ။ ၀န်ထမ်းတွေလည်း လူတွေပဲလေ သူတို့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စဆိုတာရှိတာပဲလေ တစ်ခါတစ်ခါခွင့် ယူချင်လို့ ခွင့်သွားတိုင်ရင် မေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေများ ဆရာမတွေများ ခွင့်ယူပြီးလို့ Head အခန်းထဲက ထွက်လာရင် ငိုမဲ့မဲ့တွေ တစ်ချို့ ဆို ငိုတောင်ငိုရတယ်ပြောတယ်။ မိဘ နေမကောင်းလို့ ခွင့်တောင်းတာတောင် ဆေးရုံတက်စရာမလိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်ရင် ခွင့်မပေးနိုင်ဘူးဆို ပြီး ရက်ရက်စက်စက်အပြောခံရတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ ILBC မှာ ၀န်ထမ်းတိုင်းတစ်နှစ်ကို ခွင့်ရက် ၁၀ ရက် ရပါတယ်။ အဲဒါ တရားဝင်ကို ပြဌာန်း ထားတာပါ။ ဒါကိုတောင် ခွင့်မပေးချင်ကြတဲ့ head တွေ ဘာကို မာနတွေ တက်ပြနေတာလဲဆိုတာမသိပါ။ ပြီးတော့ သူတို့နဲ့အပေးအယူ တည့်တဲ့သူနဲ့ မတည့်တဲ့သူနဲ့ ဆက်ဆံပုံချင်းကွာပါတယ်။ ဟို ကုလား ဆန်ဆန် ဆရာမ က ပိုဆိုးပါတယ် နာမည်တော့ သိပ်မသိပါ။ သူ့ထက်အကြီးတွေလာရင် သူ့မျက်နှာက တစ်မျိုး အငယ်ဆရာမတွေ ဆိုတစ်မျိုးတဲ့ စပရိန်မျက်နှာဆိုပဲ ။ ဆရာမတွေ သနားစရာကောင်းကြောင်းပါ။ မသိကြတာတွေ သိအောင် ပြောပြချင်တာလည်းပါပါတယ်။ အလုပ်ဆိုတာရှာရမလွယ်လို့ သာ တင်းခံလုပ်နေကြတဲ့လူတွေ ပါ။ မကျေနပ်တာလည်း တိုင်ခွင့်မရ တစ်ခါ တစ်ခါတွေးမိတယ် ဆရာ/ဆရာမတွေ အတွက် suggestion box လေးထားပေးရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့ နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီတွေ အဲလိုထားပါတယ်။ ဒါကပြောရရင် နှစ်ဖက် နှစ်လမ်း အကျိုးရှိတဲ့ ကိစ္စလို့လည်း ထင်မြင် မိတယ် အဲကနေ အထက်လူကြီးပိုင်းတွေ Idea အသစ်ရရင် လည်းရမယ်လေ။ ဒါမှ ပိုတိုးတက်မယ်လို့လည်းထင်မိတယ်။ ပြီးတော့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့Idea ကိုယူသုံးပြီး ဆုပေးစနစ်ကျင့် သုံးသွားရင် ဆရာ/ဆရာမတွေကိုလည်း motivate လုပ်ပေးရာရောက်ပါတယ်။ အခုတော့လား တခြား ကုမ္ပဏီတွေ နှစ်ကုန်ရင် bonus ဆိုတာ ILBC မှာမရှိပါ။ လခထုတ်တိုင်း retained salary ရှိပါတယ်။ အဲဒါကိုနှစ်ကုန်ရင် ထုတ်ပေးပါတယ်။ bonus မဟုတ်ပါ။ ကိုယ့်လစာကိုယ်ပြန် ရချင်းသာဖြစ်ပါတယ်။လတိုင်းဖြတ်သွားတဲ့ လစာကို စုစုထားပေးပြီး နှစ်ကုန်ပြန်ပေးတာပါ။ ဘာမှမထူးပါဘူး။ အဲဒါတောင်မှ သူတို့ချမှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းနဲ့ အညီနေမှ အပြည့်ပေးတာပါ။ ကျောင်းနောက်ကျတာတို့ တစ်ခုခု အမှားလုပ်မိတာနဲ့ ကိုယ့်လစာကိုတောင် ပြန်သိမ်းမယ့် ဘီလူးစီး အကျင့် ကျင့်သုံးနေကြတာပါ။ ပြောရရင် ILBC ဆရာ ၊ဆရာမတွေ အကုန်ဆင်းရဲသားတွေပါ။ အဲကနေ ဖြတ်စားခုတ်တာကတော့ တော်တော်ကို လူမဆန်တာပါ။ ကိုယ်ချင်းစာတရာမရှိကြတဲ့ လူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ နည်းနည်းလေးမှကို ကိုယ်ချင်းမစာတတ်ကြတာပါ။ ရေးတာလည်းရှည်ပြီဆိုတော့ ဒီလောက်နဲ့ပဲရပ်ပါတော့မယ်။ အားလုံး ကို အထူးလေးစားပါတယ်။
ကောင်မလေး ငယ်ငယ် has written 1 post in this Website..
View all posts by kgmalay.girl →
အတူတူ ပါဘဲ အရင်အစိုးရခေတ်ရော အခု အစိုးရသစ်ခေတ်ရောငွေများတရားနိုင်ခေတ်ဘဲ။
မူတွေဘယ်လောက်ပြောင်းပြောင်း ပေါ့လေ သတင်းစာတွေမှာ ဂျာနယ်တွေမှာလဲဘယ်လိုဘဲပြုပြင်သင့်ပါတယ်ဘဲရေးရေးအလကားဘဲတကယ်လက်တွေ့ပြင်နေကြတာက
ဗဟုသုတ အဖြစ်ကြားရ လို့အံ့သြစွာကျေးဇူးတင်ရပါတယ်..
တနည်းနည်းနဲ့အထက်ကလူကြီးတွေသိအောင်လုပ်သင့်တယ်ထင်ပါတယ်..
ဟုတ်ကဲ့ အဲလိုကြီးပါရှင်လို့ပဲ ပြန်ဖြေပါရစေနော်
ဆံတိုမလေး ကောင်မလေး မင်းကြောင့် ကိုယ်အရက် သောက်ပြီလေး သစ္စာမရှိတဲ့ ဆံတိုမလေး ကောင်မလေး…….။
အရည်ချင်းရှိလျှက်နဲ့ ခံစားခွင့်ရသင့်သလောက် မရလို့ ထင်ပါရဲ့နော်….
ကျွန်မ အကြံပေးချင်တာကတော့လေ ၊ ကိုယ့်တန်ဖိုးကို မသိတဲ့ နေရာမှာနေတာထက် ၊ အဲ့ဒီနေရာက စွန့်ခွာပြီး တခြားအလုပ်မှာ ရှိသမျှ အရည်ချင်းတွေပြပြီး ၊ ရသင့်တဲ့ ခံစားခွင့် ၊ လစာတွေကို ရအောင် ကြိုးစားခွင့်တွေရှိပါသေးတယ် ။ စိတ်ဓါတ်မကျပါနဲ့ ဆုတ်လည်း စူး ၊ စားလည်း ရူး တဲ့ အခြေနေကို သတ္တိရှိရှိရဲရဲဝံ့ဝံ့ပဲ ရင်ဆိုင်လိုက်ပါနော် ။ ယူနီဖောင်းအတွက် ပိုက်ဆံပြန်ဖြတ်တယ်ဆိုတာကတော့ အလုပ်တစ်ချို့မှာ ကြားခဲ့ဖူးပေမယ့် ဘ၀င်မကျပါဘူး ။ ယူနီဖောင်းဆိုတာ အလုပ်က ပံ့ပိုးပေးရမှာပါ ။ သူတို့စိတ်ထဲ ဆင်ပြီးမှ အလုပ်ထွက်လျှင် ပါသွားမှာ စိုးပုံရတယ် ။ ယူနီဖောင်းကို အလုပ်သင်၊ အစမ်းခန့် ကာလမှာ မပေးပဲ ၊ အချိန်တစ်ခုကျမှ ထုပ်ပေးလျှင် သူတို့လည်း မဆုံးရှုံးပါဘူး ။ စိတ်ဒုက္ခတွေ အမြန်ဆုံး ပြေလျော့ပျောက်ကင်းနိုင်ပါစေနော် ။
အဲဒီလို အထက်ဖား အောက်ဖိHead တွေက ကုမ္ပဏီတိုင်းမှာ တစ်ပုံကြီးပါပဲ.ကိုယ်ချင်းစာ တယ်လို့ပြောတာပါ.ဒါတောင် ဆရာမက မြို့ပေါ်မှာ.ကျွန်တော်တို့ဆို တောထဲတောင်ထဲ လုပ်ရတာပါ.မကြောက်နဲ့ ဆရာမရေ ရဲရဲသာ ပြန်ပက်.မြန်မာနိုင်ငံမှာ အလုပ်မရှားတော့ပါဘူး။
ILBC မှ မဟုတ်ပါဘူး ၀န်ထမ်းတော်တော်များများ ကို အလုပ်ရှင်တွေက ရသလောက် အကျိူးမြတ်ထုတ်
နေတာ ပါ..၀န်ထမ်းတွေကလည်းလက်လှမ်းမမှီတာရော အရှည် အရှည် မဖြစ်ချင်တာတွေကြောင့်
ပြသာနာတွေ ကအပြင်ကိုသိပ်မရောက်တာ ပါ..အခု အထည်ချုပ်တွေ စက်မှု့ ဇုန်တွေမှာ ၀န်ထမ်းတွေ
ပြသာနာတွေ ဖြစ်နေတာ ခဏခဏကြားနေရပါတယ်..သတ်မှတ်တဲ့ ဝန်ထမ်း ရပိုင်ခွင့်ကို အနိမ့်ဆုံး
အဆင့် သတ်မှတ်ပြီးတော့ ခိုင်းတဲ့နေရာမှာတော့ ရသလောက်ပိုခိုင်းနေကြတာပါ…ကျနော့်အသိတစ်ယောက်
ဆို အလုပ်က နားရက်ကို ရတဲ့ လစာ က ၈၀၀၀၀ ဆိုတော့ လည်း ပေးရသလောက် တန်အောင်ခိုင်းနေကြ
တာပါဘဲ..ဒီပြင့်ပြောင်းဖို့ ကျပြန်တော့လည်း အတူတူ နဲ့ ထူးမခြားနား တွေများပါတယ်..နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတွေ
နင့် အပြင်ဝန်ထမ်းတွေအတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ အလုပ်ရှင် အလုပ်သမား စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုတာလည်း
ရှိသလား မရှိသလားတောင်မသိပါဘူး..ရှီခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း အလုပ်သမားတွေ ဘက်က တဖက်သတ် လက်မှတ်ထိုးပြီး ချပ်ကိုင်ထားဖို့အလုပ်ရှင်တွေက စဉ်းစားထားပြီးချုပ်ထား တာပါ..ဥပမာ ကျနော်တို့ ဆက်သွယ်ရေးက ဖုန်းကို ကိုင်သလိုပေါ့..ဟိဟိ..၀ယ်လိုက်ထဲကကိုယ့်ဘက်က အရုံးဆိုတာချည်းဘဲစာချုပ်ထဲမှာ ရေးထားတာသူတို့ ဘက်ကဘယ်လိုဝန်ဆောင်မှု့ တွေ ပေးမယ်ဆိုတာမျိုးတစ်ခုမှရေးမထားပါဘူး..အဲ့လိုပါဘဲ..ရက်လင့်အင်တာနတ်လိုင်း ၀ယ် လည်း ဒီလိုပါဘဲ…မသုံးခြင်ဘူး ဆိုရင် အဆုံးခံဘဲ…သူတို့ ဘက်က လိုင်းပေးတာ နည်းနေလည်း သည်းခံသုံးဘဲ..လစဉ်ကြေးလျှော့မပေးပါဘူး…မကျေနပ်ရင်….ဘဲကွာ ဆိုပြီးတောင် ဖေ့ဘုတ်မှာ အပြောခံရသေး…ဟေးဟေး..ဥပဒေဆိုတာ ၀န်ထမ်းတွေကို မကာကွယ်ပေးနိုင်သေးပါဘူး အလုပ်ရှင်တွေ
အတွက် ကတော့ အဲ့ဒီအချက်ကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး တဖက်သတ် စည်းမျဉ်းတွေချမှတ် ပြီးဝန်ထမ်းတွေ
ခန့် ဦးမယ်. စီးပွားရေးသမားကတော့ စီးပွားရေးတွက် တွက်ပြီးတော့ နိပ်ကွပ်နေဦးမှာပါဘဲ အဲ့ဒါကို လွတ်တော်ထဲက အမတ်တွေ အိပ်ငိုက်မနေဘဲ နှင့် အမြန်ဆုံး ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ပါစေလို့ သာ ဆုတောင်း
ပြောရရင်တော့ကျွန်မလဲ ILBC ကဆရာမတယောက်ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကျွန်မလုပ်စဉ်ကတဲက Admin နဲ့တည့် ရင်လစာတိုးပါတယ်၊ မတည့်ရင်လစာမတိုးပါဘူး။ ဆရာမတွေဆိုအသေဖိနှိပ်ပြီး ကျောင်းသားနဲ့ မိဘတွေကို ချိုမြနေ အောင်ဆက်ဆံပါတယ်။ ကျောင်းသားမိဘကအဲဒီဆရာမကျောင်းထုပ်ပေးပါ ဆိုရင်ထုပ်ပါတယ်။ ကျောင်းသားမိဘ Complain တက်ရင် အဲဒီကျောင်းသား ဘယ်လောက် အမှတ်နဲ့ပဲ ကျနေပါစေ အောင်စာရင်းထွက်ရင်အဲဒီကျောင်း သားအောင် ပါတယ်။ အမှတ်ခြစ် ရတဲ့ဆရာမပဲ ငပေါဖြစ် ပါတယ်။ အဲဒါဟိုးအရင်ကတဲက ILBC ပါ။ ကြာခဲ့ပါပြီ။ အခုခေတ်မှာလဲ ILBC ကဆရာ မတွေက မြန်မာ ကျောင်းကဆရာမတွေလိုပဲ ကန်တော့တဲ့ကလေးဆိုတမျိုး၊ မကန်တော့တဲ့ကလေးဆိုတ မျိုး ဆိုတဲ့အသံတွေကြားနေရတယ်။ လုံခြုံရေးတွေကလဲ ပိုက်ဆံပေးထားတဲ့မိဘရဲ့ကားဆိုတမျိုး မပေးထားတဲ့ ကားဆိုတမျိုးဆိုတဲ့အသံတွေကြားနေရ တယ်။ ကျောင်းအုပ်ချုပ်မှု့ကတော်တော်လေးလျော့ရဲနေတယ်လို့ခန့် မှန်းမိပါတယ်။
တစ်ခု လောက် ၀င်ပြောချင်တာ က တော့ တာမွေ ကျိုက်ကဆံ ILBC ကျောင်းဆင်း ချိန်3နာရီ ပတ်လည် ဆို အဲ့ကျောင်းနားမှာ ကား ရေရေလည်လည် ကျပ်တော့ တာပါပဲ …။ ကျောင်းသားလာကြိုတဲ့ ကားတွေ က စည်းကမ်း မရှိ . နှစ်ထပ် သုံးထပ် .. နဲ့ လမ်းလယ် ပေါ်တက်ရပ် .. ထွက်ချင်သလို ထွက် .. ၀င်ချင်သလို ၀င် … စည်းကမ်း ကလဲ မရှိ မျက်နှာတွေကလဲ နွားရေကူး သလို မော့ နေတာ ပဲ။ အမြင့်ကား စီးပြီး စိတ်ထား မမြင့် နိုင်ကြဘူး လို့ပဲ တွေးမိပါတယ်။ အဆိုးဆုံး ကတော့ အဲ့ဒီ့နားက မော်တော်ပီကေ တွေ နဲ့ ILBC ရဲ့ လုံခြုံရေး … ငဖား ကောင်တွေ ပဲ …။ လုံခြုံရေးက main လမ်းမကြီး မှာ သွားနေတဲ့ ကားကို လူ နဲ့ ကာပြီး အတင်း တား တယ် ပြီးတော့ လမ်းသွယ်က ကားကို ထုတ်တယ် .. အဲဒါကို မော်တော် ပီကေ က ကြည့်နေတယ် .. လူနဲ့ ကာ လို့ မဟုတ်ရင် စိတ်ပေါက် တဲ့ တနေ့ နေ့ ၀င်ကို တိုက်ပြီး လျှော်ကြေး တောင်း ပစ်မယ် လို့ကို ဆုံးဖြတ် ထားပြီးသား …။ အဲ့နားက တာမွေ ကျိုက်ကဆံ မီးပွိုင့် နဲ့ သင်္ဃန်းကျွန်း မီးပွင့် က မော်တော် ပီကေ တွေ ကလဲ ကားပေါ်က ပစ်ချ ပေးတဲ့ ပိုက်ဆံ ပဲ လိုက်ကြည့်နေကြတာ … တစ်ရက်တော့ အခု ပိုစ့် ပိုင်ရှင် ရဲ့ ပိုစ့် ကို ဓာတ်ပုံ တွေ နဲ့ အသက်သွင်း အားဖြည့် ပေးပါဦးမယ်။
ILBC ကျောင်းသားတွေကို လာကြိုတဲ့ ကားတွေ ရဲ့ စည်းကမ်း မရှိမှု များကို နှစ်ရှည်လများ ခံ နေရသူ
လုလင်ရေ မန်းလေး ရူဘီမတ်နဲ့ တလမ်းတည်းပေါ်မှာ ရှိတဲ့ ILBC ကျောင်းရဲ့ ကားလမ်းပိတ်ချက်ကလည်း ၉.၉၉၉၉ လောက်ရှိပါတယ်။ စက်ဘီးလမ်းပေါ်မှာပါ ကားတွေ တက်ရပ်လို့ ပြသာနာ ဖြစ်ပေါင်းလည်း များပါပြီ။ ယာဉ်ထိန်းရဲ လည်းရှင်း
မနိုင်ပါ။ ဝေးတဲ့သူတွေ အတွက်းအသွားအပြန် လွန်ရော ကျွံရော ( နာရီဝက် ကို) ၂ နာရီ အနည်းဆုံး ကြာတတ်ပါတယ်။
ခုတော့ တခြားနေရာမှာလည်း ကျောင်းသစ်တွေ ဆောက်ထားတာမို့ လူနဲနဲခွဲလိုက်သလို ဖြစ်သွားတယ်။ အရမ်းကြပ်တာကနေ နည်းနည်းလျော့သွားတာပါ။
ပြီးရင် ဒီလို Head က အောက်ကို ဖိတဲ့ပြသာနာက သိသလောက် အမျိုးအရင်းကြီး တယောက်လုပ်နေတဲ့ Int ကျောင်းမှာလည်း ပရီကျောင်းက Head တွေ အဲ့လို အောက်က ဆရာမတွေကို နိုင့်ထက်စီးနင်းလုပ်တဲ့ ပြသာနာတွေ ကြားခဲ့ဖူးပါတယ်။
မခံနိုင်သူတချို့ ကျောင်းပြောင်းကြတာမို့ ကျောင်းဖွင့်ရာသီဆို သူတို့ကျောင်းရဲ့ preschool အတွက် အလုပ်ခေါ်စာတွေ ဝေနေတတ်ပါတယ်။
” ကျောင်းမှာစည်းကမ်းတစ်ခု ရှိပါတယ် လစာကို မပြောရဘူးဆိုတဲ့စည်းကမ်းပါ။
တစ်ယောက်လစာ တစ်ယောက်မသိရဘူးတဲ့။ အဲဒါ ဘယ်လိုထင်လဲ။ ”
နိုင်ငံတကာ ကုမ္ပဏီ အားလုံး လောက်နီးနီးက ၊
လစာ နှင့် Bonus ကို ဘယ်သူ့ကိုမှ ပြောခွင့် မရှိပါဘူး ။
( အစိုးရ တာဝန် ရှိသူ အခွန်အရာရှိကို မှလွဲ၍ )
ဒါ ထုံးစံပါပဲ ။
သူတို့က ပိုက်ဆံပေးပြီး ခန့်ထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ၊
သူတို့ကြိုက်တဲ့သူကို ပိုက်ဆံ ပိုပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
အဲတော့ ၊ ပိုက်ဆံ ပိုရချင်ရင်တော့ ၊
သူတို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံ အလုပ်လုပ်ပေးရပါမယ် ။
သူတို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံ အလုပ်မလုပ်နိုင်ရင်တော့ ၊
အကောင်းဆုံး အကြံပေးလိုက်ပါမယ် ။
အလုပ် ထွက် လိုက်ပါ ။
အဘဖောပြောတဲ့အထဲမှာ သူတို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံလုပ်ပေး ဆိုတာလေးပါ
သူတို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံတဲ့ အဲဒါမှာတွေးစရာက သူတို့ကဘယ်လိုကိုကြိုက်တာလဲပေါ့။
တာဝန်ကိုကျေပွန်မှုရှိရင်တာဝန်သိစိတ်အပြည့်ရှိရင် သူဟာဝန်ထမ်းကောင်းလို့သတ်မှတ်လို့မရဘူးလား အဲလိုလူဟာ မဖားတတ်တာတခုတည်းနဲ့
လစာမတိုးတော့ရင်..။ ခနခနအလုပ်ပြောင်းဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူး အဘရေ
အလုပ်ရှာရတယ်ဆိုတာ တကယ်မလွယ်တာပါ။ လုပ်ကြည့်ပြီးသူတို့အကြိုက်မလုပ်နိုင်လိုက်ထွက်လိုက်သာဆိုရင်တော့။
” ဖားတတ်တဲ့သူလား ။ ၀န်ထမ်းအချင်းချင်းမကောင်းကြောင်း
အထက်ကို လက်တို့တတ်သူကိုလား ”
ရှင်းရှင်းလေးကို ရှုပ်အောင်တွေးနေတယ် ။
ကိုယ်က အလုပ်ရှင် ရဲ့ ပိုက်ဆံကို ယူနေတာလေ ၊
အလုပ်ရှင် ကြိုက်တဲ့ပုံစံ လုပ်ပေးရမှာပေါ့ ။
အလုပ်ရှင် က ဖားမှကြိုက်ရင် ဖားပေးရမှာပဲ ။
အလုပ်ရှင် က ၀န်ထမ်းအချင်းချင်း လက်တို့ မှကြိုက်ရင် လက်တို့ ပေးလိုက်ပေါ့ ။
ကိုယ်က သူ့ဆန်စားနေတာလေ ၊
ခပ်လွယ်လွယ်ပြောရရင် သူ့ကျွန်ပေါ့ ။
သူ့စိတ်ကြိုက် မလုပ်လို့ ၊ ကိုယ့် စိတ်ကြိုက် လုပ်ချင်လို့လား ။
အေး ၊ အဲလိုအလုပ်တွေကို ကိုယ်က မလုပ်ချင်ဘူးလား ၊
လွယ်လွယ်လေး ၊ အဲဒီ အလုပ်ရှင်ရဲ့ အလုပ်က ထွက်လိုက်ပေါ့ ။
အဘဖောပြောတာလည်း မှန်တာပဲလေ … သူ့အမျိုးဖြစ်တာနဲ့တင် … သူ့စိတ်ကြိုက်ပေးကမ်းလို့ ရနေတာပါပဲ ။ သူ့ဆွေသူ့မျိုး နေတတ်လျှင် ကျေနပ်စရာပေါ့ နော် … ။ သူ့အလုပ်ကောင်းကောင်းလည်ပတ်ဖို့ထက် ၊ ဆွေမျိုးတွေကြားက relationship ကိုပိုဦးစားပေးတယ်လို့ပဲ .. သဘောထားလိုက်ပါ ။
ရုံးတွင်းဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ရုံးတွင်း ဆက်ဆံရေးကို သတိမထားမိပဲ သူ့အသိုက်သူဖို့ တာ သိုသိုသိပ်သိပ်မလုပ်နိုင်တဲ့ ပိုက်ဆံရှိပြီး ဦးနှောက်မရှိတဲ့ သူဌေးမျိုးဆိုလျှင်တော့ ..ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းတွေကို ကြာကြာထိန်းနိုင်စွမ်း ရှိမှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် … . မုဒိတ္တာသာ ပွားလိုက်ပါအစ်မရေ … ။ အဲ့လိုမှ မလုပ်နိုင်ဘူးဆို … ကိုယ့်အရည်ချင်းကို အသိမှတ်ပြုမခံရတဲ့ အလုပ်မျိုးဆို …. တွေဝေမနေပဲ … တခြားပြောင်းသင့်တယ်လို့ ခံယူထားပါတယ် ။
သူ့ဆန်စားလို့ ရဲရမယ် ဆိုပေမယ့် လည်း …. တရားမ၀င်တာမျိုး ၊ အဓမ္မခိုင်းစေတာမျိုးကိုတော့ ကိုယ်ပိုင်အသိနဲ့ ငြင်းဆန်ခွင့်ရှိတာပဲလေ …… ။ တစ်ချို့ အလုပ်တွေမှာ ဘုန်းကြီးရူးနဲ့ လှေလူး ဟုတ်တုတ်တုတ်တွေ လုပ်နေတာရှိတာကြောင့်ပါ …. ။ အလုပ်ရှင်က ကိုယ့်ကို ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသလို ကိုယ်ကလည်း ကိုယ့်လုပ်ရမယ့် အလုပ်ကို ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ခွင့် အပြည့်ဝ ရှိပါတယ် .. ။
အဘဖောပြောတာ မှန်ပါတယ် ဒါက သိပ်ပြီးတော့ Feeling မရှိပါဘူး ဒါပေမယ့် ခံရတဲ့လူက ဘယ်လိုလဲဆိုတာပိုသိပါတယ်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး အလုပ်ချိန်နောက်မကျသလို သူတို့ပြောတဲ့ စည်းကမ်းနဲ့အညီနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လစာကျတော့ သူတို့အမျိုးတွေလောက်မတိုးတာကျတော့ရော အဘဘယ်လိုပြောချင်လဲ ကျွန်မ အလုပ်ကိုလေးစားပါတယ် တကယ်ကိုလေးလေးစားစားနဲ့ကို ကျွန်မနေတာပါ အဓိကကတော့ ကိုယ့်ကို မကောင်းမြင်မှာ ကြောက်တာ နဲ့ပဲ ကျွန်မ အတတ်နိုင်ဆုံး အပြစ်ကင်းအောင်နေတာပါ ဒါပေမယ့် လစာ ကျတော့ …….. အဘလည်းပြောပါဦး အခုခေတ် အလုပ်ရှားတာ လူတိုင်းအသိပါ။ ဘွဲ့ ရအလုပ်လက်မဲ့တွေအများကြီးပါ။ သူတို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံအတိုင်းနေ တိုင်းလည်း ရသင့်သလောက်မရတာကရော… အလုပ်ထွက်လို့ ထိုင်နေမှအကောင်းသား ထသွားမှ ကျိုးမှန်းသိ သူ့ထက်ငါ လူစွမ်းကောင်းများနေတဲ့နေရာဖြစ်နေရင် ကျွန်မတော့ နှစ်ခါပြန်သေပြီပေါ့
သူ့ပိုက်ဆံကို ၊ သူ့အမျိုးကို ၊ သူပေးတာ ဘာပြောစရာရှိသဒုံး ။
သူ့အမျိုးကို သူ့ပိုက်ဆံ ပေးတဲ့ကိစ္စမှာ ၊
အဲဒီ သူ့အမျိုးဟာ တော် စရာလည်း မလိုဘူး ၊ အလုပ်လုပ်စရာလည်း မလိုဘူး ၊
သူ့အမျိုး ဖြစ်နေရင်ကို ၊ အရည်အချင်းက လုံလောက်နေပြီ ။
အဘ အမျိုးတွေဆိုရင် အဘ အတွက် ၊
ဘာတစ်ခုမှ အလုပ်လုပ်မပေးဘဲနှင့်ကို ၊
အမျိုးမို့လို့ ဆိုပြီး ပေးနေရတာတောင် ရှိသေး ။
သူတောင် ကျောင်းရဲ့ Image အထိခိုက်ခံပြီး Favoritism လုပ်သေးတာပဲ ၊
နာမည်ပျက်စရာရှိ သူ့ကျောင်း နာမည်ပျက်မှာပဲ ၊
ဆုံးရှုံး စရာရှိ သူ့ ပိုက်ဆံတွေ ဆုံးရှုံး မှာပဲ ၊
ကိုယ်တွေက အနေသာကြီး ။
တစ်ခုပဲရှိတယ် ၊ အဲဒီကျောင်းအုပ်က အုပ်ချုပ်ပုံ ညံ့ဖျင်းလို့ ၊
ကျောင်း မအောင်မြင်မဲ့ပုံပေါ်လာရင် ၊
ကိုယ်က ဦးအောင် ထွက်ပြေးနိုင်ဖို့ ပြင်ထားပေါ့ ။
နောက်တစ်ခါ ထပ်ပြောမယ် ။
ဒါဟာ ဈေးကွက် စီးပွားရေးခေါ်တယ် ။
ဥပဒေ တွေကို မညိစွန်း သရွေ့ ။
အလုပ်ရှင်ဟာ သူ ကြိုက်တာ သူလုပ်ခွင့်ရှိတယ် ။
အလုပ်ရှင်ဟာ သူ ကြိုက်သလို သူအုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိတယ် ။
အဲလိုပဲ “kgmalay.girl” မှာလည်း
ကိုယ် ကြိုက်တာ ကိုယ် လုပ်ခွင့်ရှိတယ် ။
မလုပ်ချင်ရင် ထွက်ပါ ။
There are only (2) rules.
If the Boss is wrong, refer Rule – 1.
မေ့နေမှာစိုးလို့ ထပ်ပြောမယ်နော် ။
ဒီ ကမ္ဘာ ကြီးမှာ ၊
Survival of ” fittest ” ပါ ။
Survival of ” Cleverest ” မဟုတ်ပါ ။
အခြေအနေ နှင့် အံဝင်ခွင်ကျ မဖြစ်ရင် မြောင်းထဲကို ညောင်းပဲ ။
ပိုတော်တာတွေ ပိုလုပ်တာတွေ ပိုယဉ်ကျေးတာတွေ ထည့်စဉ်းစားမှာ မဟုတ်ဘူး ။
အကြံပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ ဘဘFR ပြောသလိုပဲ အလုပ်ထွက်လိုက်ပါ
ဒီလိုစိတ်ခံစားချက်မျိုးနဲ့ ဆရာမလုပ်ရတာ ဘယ်သူ့အတွက်မှအကျိုးမရှိပါဘူး
ကလေးတွေအတွက်လည်းမကောင်းသလို ဆရာမကိုယ်တိုင်အတွက်လည်း အရည်အချင်းတွေတိုးတက်သင့်သလောက် မတိုးတက်ဘူးလို့ မြင်မိပါတယ်
အခုအလုပ်ထက်သာတယ် လစာလည်းသဘောကျတယ်ဆိုရင် လုပ်ပေါ့
ပို့စ်ကိုဖတ်ကြည့်ရသလောက်ဆိုရင် ILBC က အင်တာနေရှင်နယ်မဟုတ်ဘူးပဲ
ဒါပေမယ့် ကျောင်းနောက်ကျလို့ လစာဖြတ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ မှန်တယ်လို့ယူဆပါတယ်
ကိုယ်ကိုတိုင် အဲဒီအလုပ်က ပိုသာမယ်ထင်လို့ လုပ်တာပဲလေ။
ILBC ကဆရာမအလုပ်ကမကောင်းရင်၊ ပညာရေးဌာနဆရာမလုပ်ပေါ့။
သူ့ကျောင်းနေရင်သူ့စာအံရမယ်တဲ့။ ကိုယ့်ကျောင်းနေမှကိုယ့်စာအံခိုင်းပေါ့။ သူ့ကျောင်းမှာကိုယ့်စာသွာအံခိုင်းရင်တော့ အခက်အခဲရှိနိုင်ပါတယ်။
သူ့ဆီမှာဝန်ထမ်းလုပ်ပြီဆိုကတည်းက ကိုယ့်လုပ်အားနဲ့ စားဝတ်နေရေးကိုအဆင်ပြေဖို့သူ့ဆီကလစာဆိုတဲ့ ငွေကြေးနဲ့ကိုလဲလှယ်တာဖြစ်ပါတယ်။ နည်းတာလည်းရှိနိုင်သလို များတာလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာလည်းဈေးကွက်သဘောတရားအရ လုပ်အားဆိုတဲ့ supply ကများနေရင် တယောက်ထွက်ရင် နောက်တယောက်အစားထိုးဖို့မခက်တာကြောင်းလခနဲတတ်ပါတယ်။ Demand ဆိုတဲ့အလုပ်ပေးနိုင်တဲ့သူနဲရင် နောက်အလုပ်တခုရဖို့အခက်အခဲဖြစ်နိုင်တာကြောင့် ရတဲ့လခနဲ့ပဲ ပေကပ်လုပ်နေရတတ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်သင့်လည်း ဘာလုပ်သင့်လည်းဆိုတာ ကိုတော့ ကိုယ်ဟာကိုယ်ပဲဆုံးဖြတ်ပါ။
ကျွန်တော် သည်ပို့ စ်ကို စတင်ကတဲက ဖတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ တိုက်ဆိုင်ချင်တော့ ကျွန်တော်တို့ မန်းတလေးဂေဇက်မှာ ပညာဗဟုသုတတွေ ဖြန့် ချီပေးနေတဲ့ တီချယ်နု နဲ့ တွေ့ ဖြစ်ချိန်မှာ ဒီပို့ စ်ပါ အကြောင်းအရာများနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောဆိုဖြစ်တော့ ၊ တခြားကျောင်းတွေမှာတော့ ဒီလိုမျိုး ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ် ရှိတယ်ဆိုတာ မကြားဖူးဘူးတဲ့ ။ တီချယ်နု ဆီကနေ ပညာသင်သွားခဲ့တဲ့လူတော်တော်များများဟာ အင်တာနေရှင်နယ် စကူးတွေမှာ ဆရာ/မ ပြန်လုပ်နေကြပါတယ် ။
အိုင်အယ်ဘီစီ ကတော့ နာမည်ပိုကြီးလာပါပြီ ။ အဆိုးနဲ့ 
နလပုံးတုံးမို့ ဘာမှ သိပါဘူး .. အဟီးးးးး
တစ်ခု ပြောချင်လို့ပါ ..
အဲ့ဒါကတော့ စာလေးတွေကို အပိုဒ်လေးတွေ ခွဲပြီး ရေးပါလားဟင်င်င် ..
ဒါဆို ဖတ်ရတာ ပိုပြီး ရှင်းလင်းသလို၊ ကြည့်လို့လည်း ပိုကောင်းလို့ပါ ..
lso thu says:
ထပ်တူခံစားရပါတယ်။ ပြောတော့ အင်တာနေရှယ်နယ်ကျောင်းတဲ့။ နယ်ကျောင်းမှာဆိုရင် Teacher Training တောင်မရှိ။ ဒီလိုနဲ့ ILBC ဆရာမ တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒီကြားထဲ တီချယ်တွေက တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်ပြောင်း၊ Head နဲ့ Admin ကလဲ တစ်နှစ်တစ်ခါလောက်။ ကျောင်းက အထာကျခါရှိသေး ဟော ပြောင်းပြန်ပြီ စနစ်တခု။ သူတို့တွေက နယ်အထာကို နယ်ကလူတွေထက်သိတယ်လေ၊ လုပ်လိုက်ရင် ရန်ကုန်က ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကရှိသေး။ ကျောင်းအတွက် Activity တစ်ခုခုဆိုရင် Meeting လုပ်ပြီး တိုင်ပင်တာတွေလဲ မရှိကြဘူး။ လုပ်ချင်ရာလုပ်ပုံစံဘဲ။ မသိတဲ့သူအတွက်(လူသစ်)က နီးရာလူကိုဘဲတိုင်ပင်ရတယ်။ နီးလာရင် BY FORCE!! ရအောင်လုပ်ဘဲ။ Meeting လုပ်ဖို့ပြောတော့လဲ သူတို့မှာ အချိန်မပေးနိုင်လို့ Board မှာ စာကပ်ထားတယ်တဲ့ ကိုယ့်အသိစိတ်နဲ့ကြည့်ကြပါတဲ့။ ဖြစ်သင့်ရဲ့လား။
မြို့ကြီးတွေမှာ ကွန်ပျူတာ စက်တွေအသစ်ဆင်နေပြီတဲ့။ အော်…နယ်ကျောင်းမှာတော့ ကျောင်းစဖွင့်ကတည်းက သူများကျောင်းက စက်အကျ (P-4)တွေကို သုံးနေရပါလား။ မော်နီတာ မကောင်းတဲ့စက်တွေ သုံးနေရတဲ့ Pre ကလေးတွေကို စာနာပါတယ်။ မိဘ တွေကတော့ တတ်စေချင်လို့ ကောင်းရာထား၊ ခုတော့ ကလေးတွေမှာ ဘယ်ချိန် မျက်စိ ထိခိုက်မလဲဆိုတာ မသိတဲ့ စက်တွေရှေ့မှာရောက်နေပါလား။ (မိဘများသိကြပါစေ) ဒီအကြောင်းတွေကို အထက်ကိုပြောဖန်တာများတာ ဘာမှ မထူးလာပါဘူး။
အင်တာနေရှယ်နေကျောင်းလို့တာပြောတာ စာသင်ခန်းတစ်ခုမှာရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ ဘီဒို တောင် လိုအပ်လို့ မနဲနဲ့တောင်းခဲ့လိုက်ရသေး။ အခန်းမှာ ဆရာသုံး စားပွဲနဲ့ ထိုင်ခုံ ဆိုတာ မရှိခဲ့ဘူး။ အခန်းက Pre ကွန်ပျူတာခန်း။ လိုအပ်လို့ တောင်းတာတောင်မှ အထက်က အမိန့်မရလို့ နဲ့၊ ကျောင်းအတွက် အသုံးများလို့ မ၀ယ်သေးတာနဲ့ဘဲအကြောင်းပြခဲ့တာ တော်တော်ကြာသွားတယ်။ ဆရာသုံး စားပွဲတာ မတတ်နိုင်တာ Sky Net ကတော့ တတ်နိုင်ရှာတယ်။
စာရှည်သွားပြီ။ ILBC က သာမာန်ဝန်ထမ်းတွေကို စာနာပါတယ်။ အထက်ဖားအောက်ဖိ ဒဏ်ကနေ လွတ်မြောက်နိုင်ပါစေ။ ILBC မှာလဲ မြန်မြန် ဒီမိုကရေစီ ရကြပါစေလို့….
ခုမှဖတ်ရလို့ ကဲမှတ်လေးဝင်ပေးပါရစေ ကောင်းမလေးရေ အစကနေဖတ်ကောင်းလာတာ အဆုံးနားရောက်မှစိတ်နာသွားတယ် သူတို့ဆီမှာ ဝန်းထမ်းရေးရာ တာဝန်ရှိအရာရှိတွေမရှိဘူးလား ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ ဒါ human resouce managemွဲ့ent ကိုမသိလို့ပေါ့ သူတို့သာ နားလည်းတယ်ဆို ဆေရုံတက်လောက်အောင်မပြင်းထန်သေးဘူးလားလို့မေးရက်မှာမဟုတ်ဘူး အော်မေ့သွားလို့ head လည်းသူ HR မနနေဂျာလဲသူဘဲမို့လား နောက်အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာထိုက်သင့်တဲ့transparency မရှိဘူးဆိုတော့ စီမံခန့်ခဲ မွမှုကိုနားမလည်းတာ နားလည်းတယ်ဆိုရင်တော့ ဒါ လူမှုရေးစိတ်ဓါတ်ခေါင်းပါးတာ လူမှုရေးစိတ်ဓါတ်ခေါင်းပါးသူဆိုတေည့ ဘာသာရေးလေ့လာလိုက်စားမှုနဲလို့ပေါ့ အိုးမ မုန့်လုံးကြီးစီကပ်ကုန်းပီးအမရေ ရှုပ်ပါတယ်ဗျာ ဒါမျိုးလူတွေကစစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်ဟောင်းတွေနဲ့တူလို့ မဲရွေးပီးသြာုတ်ချပလိုက် လူတော့ညီပါစေပေါ့ ဒါမျိုးလူတွေက စပိုင်မွေးသိပ်တော်တာ သူတို့လည်းစပိုင်ဘဝကတက်လာတတ်လို့လေ